Press Release by the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.
GENEVA (10th September 2018) – Today, the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar have released their report on human rights violations and abuses committed in Kachin, Shan and Rakhine States in Myanmar Language.
The report is 47 pages long and found patterns of gross human rights violations that “undoubtedly amount to the gravest crimes under international law”, principally by Myanmar’s military, the Tatmadaw, but also by other security forces.
Please find the translated report here.
Contact information: Nathan Thompson, +41 76 691 0799 consultant.thompson@ohchr.org;
ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။
ဂျီနီဗာမြို့၊ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်။
ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်သည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် မတရားပြုမှုများကို မှတ်တမ်းတင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာကို ယနေ့မှစ၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထိုအစီရင်ခံစာတွင် စာမျက်နှာ (၄၇) မျက်နှာပါရှိပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အဆိုးရွားဆုံး ရာဇဝတ်မှုများ ကျိန်းသေသက်ရောက်ပြီး၊ အလွန်ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုပုံစံများကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အဓိက ကျူးလွန်ပြီး၊ တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များပါ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ထားသော အစီရင်ခံစာကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် – နေသန်တွမ်မဆမ် (Nathan Thompson)
အီးမေးလိပ်စာ – consultant.thompson@ohchr.org
This entry was posted in Uncategorized on September 11, 2018 by Aye Win.
← UN experts condemn sentencing of Reuters journalists Press Conference for Asia-Based Press – Publication of Full Report of the Fact-Finding Mission on Myanmar and Presentation to the Human Rights Council →